Home Somali News Ciidamada Cameroon oo xoreeyey Ciyaal u qafaalnaa Boko Xaram
Ciidamada Dowlada Kameroon (Cameroon) ayaa gacanta ku dhigay xero ay Kooxda Boko Xaraam ku tababari jirtay ciyaalka ay afduubaan.
Wasiirka Warfaafinta ee Kameroon Issa Tchiroma, ayaa shalay shir jaraa’iid oo uu qabtay ku sheegay in ciidamadooda ay soo badbaadiyeen caruur gaaraya 80 oo ay kooxda Boko Xaraam u tababareysay inay noqdaan maleeshiyaadkooda.
Caruurtan ayaa la sheegay inay da’adood u dhaxeyso 5 sano jir illaa 18 sano jir.
Ciidamada ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay 104 qof oo la sheegay inay ahaayeen kooxda Boko Xaram iyo tababarayaashii xeradaasi ku sugnaa.
Kooxda Boko Xaraam oo xarunteedu tahay dalka Nigeria ayaa weeraro ka waday bilihii lasoo dhaafay dalalka jaarka la ah Nigeria gaar ahaan dalalka Jaad (Chad), Niger iyo Kameroon.
Boko Xaram ayaa tuulooyinka iyo magaalooyinka ay weeraraan ka qafaasha caruurta iyo dhalinyarada kuwaasi oo ay u tababaraan inay noqdaan maleeshiyaadkooda, sirdoonkooda iyo waliba kuwa fuliya weerarada ismiidaaminta ah.
Dalalka Jaad (Chad), Niger iyo Kameroon ayaa todobaadkii tagay bilaabay olole ka dhan ah Boko Xaram oo looga qabsaday dhul badan kooxdaasi, waxaana la sheegay in maleeshiyaad gaaraya 500 kooxdaasi Arbacadii shalay looga dilay dalka Niger.
Dagaalka Amsa Love iyo Nimco Dareen Qaabka uu isu Badalay.
Somalia: Qof ku dhintay shil gaar ah oo ka dhacay magaalada Boosaaso